Ezomthetho - Mag Incredible
Qasha Abaceli Bokulimala Abalinganiselwa Kakhulu Benzuzo Yezisulu
Kwangathi 12, 2022
Ukulimala nokuhlupheka konke kuyisiqeshana sempilo yethu futhi izinto ezinjalo zigijima njengezinto ezingenakuhlukaniswa nezinjabulo ezincane esihlangana nazo. Ngesikhathi lapho ingozi ingaqondakali futhi yenzeke ngengozi lapho-ke asinamuntu obeka iphutha…
I-DUI eyiDriving Under Influence ingakwenza uboshwe noma ikwenze ukhokhe inhlawulo esindayo. Ummeli we-DUI angakusiza uqonde konke ngecala futhi akusebenzele isu elihle kakhulu lokuzivikela. Ngakho-ke ukukhetha indoda efanele i…
Ummeli womndeni yisisebenzi sezomthetho esikhokhelwayo esibhekene nodaba oluphathelene nezingxabano zomndeni. Izingxabano zesehlukaniso nempahla ngamacala ajwayelekile lapho bephikisana nodaba lwakho. 1. Isehlukaniso Lapho omunye wabashadile noma bobabili…
Ngabe Uyazi ukuthi Kungani Udinga Ummeli Wokulimala Komuntu
Izingozi nezehlakalo zenzeka nsuku zonke kanti kwezinye izingxenye zomhlaba njalo ngehora. Kunamathuba amaningi okuthi umuntu alimale ezingozini ezinjalo kwesinye isikhathi ezingaba zimbi kakhulu. Umshuwalense uphoqelekile kuzo zonke izimoto ezisebenza ku…
Ngabe Ufuna Ukusebenza Noma Ukuhlala Kwelinye Izwe? Ummeli Wokufuduka Kungenzeka Abe NguK Knight Wakho
Ummeli wezifiki unengxenye ebaluleke kakhulu okufanele ayidlale enqubweni yokuba yisakhamuzi kanye nokufudukela kwamanye amazwe. Uma uhlela ukusebenza noma ukuhlala phesheya, lapho-ke ungahle uthande ukubheka ummeli wezifiki ongakusiza ukwenza lula inqubo.…
Ungayilungiselela Kanjani Futhi Uyifakele Icala
Amacala amacala abalulekile lapho ufuna ukulungisa umonakalo owenziwe umuntu wesithathu (umuntu wesithathu angaba ngomunye umuntu noma inhlangano). Icala livamise ukufuna ukuthola ukuthi umthetho wephuliwe yini nokuthi ngubani, yini…
Amajaji Ngokuvamile Aphendukela Kwamanye AmaJustist
Abahluleli besifunda baseFederal bavame ukuchazwa njengabaquli abajwayelekile, noma ngabe kubhalwe izinketho noma ebhentshini. Kepha kwesinye isikhathi isimo siyashuba njengalapho kuphakama umbuzo ohlukile, amaqembu awavumelani futhi izimpendulo azicaci kangako. Kanjalo ...
Izimangalo ze-Cash Advances and Compensation
Lapho ulimale ngemuva kwengozi ebingelona iphutha lakho kungenzeka ukuthi uzocabanga ukwenza isimangalo sesinxephezelo ukumboza ubuhlungu, ukuhlupheka nokulahleka kwezezimali okwenzile. Kunezindlela eziningi lapho…
Ukuqonda Umthetho Wobugebengu: Amaqiniso ayi-7
ICriminal Law ifaka phakathi ukushushiswa kukahulumeni ngamacala enziwa ngumuntu. Ngaphansi komthetho wezobugebengu izinhlobo ezehlukene zobugebengu ezifakiwe ukubulala, ukudlwengula, ubugebengu obukhulu, iPhaneli yezingane namanye amaningi. Uthini umthetho? Kuchaza ukuthi ukuboshwa kwabantu kwenziwa ...
Ukuqwashisa Kwendawo, Okubalulekile Ekuvimbeleni Ubugebengu
Umakhelwane onesizotha angaba ivelele phakathi kwamanye amathuluzi namasu okunqanda ubugebengu. Lokhu akunakuphikwa ikakhulukazi kule sizini lapho amaqola namaqili ahlukene exhaphaza abahlali, ikakhulukazi abadala. Ukugqolozela ngokucophelela endaweni kungabona ama-hoodlums futhi kukhombise amaphoyisa kanye…